Waxyeellada ka timaadda 'formaldehyde' xad-dhaafka ah ee gogosha gaariga
Xogta laga helay Maamulka Badbaadada Wadooyinka ee Qaranka (NHTSA) ayaa muujineysa in shilalka taraafikada ee ay sababaan darbiyada gawaarida ay aad u badan yihiin. Waa macquul in gogosha yar ee baabuurka ay sidoo kale keeni karto khatar qatar ah oo aan la iska indha tiri karin.
Wakaaladda Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Kansarka (IARC) ayaa soo saartay warbixin ay ku qortay wasakheynta hawadu inay tahay qaybta koowaad ee kansarka dadka. Warbixinta, IARC waxay ku xustay xog in sanadkii 2015, tirada dhimashada kansarka sanbabada ee ay sababtay wasakheynta hawada ay gaartay 283,000. Laakiin dhab ahaan, dhibaatada wasakheynta hawada kuma eka oo kaliya banaanka, laakiin gudaha iyo hawada wasakheynta hawada sidoo kale waa mid aad u daran, aan ka hadalno dhibaatada dadka u geysto bini-aadanka ee ay sababeen gogosha baabuurta oo leh formaldehyde xad-dhaaf ah!
Formaldehyde waxaa loo aqoonsaday inuu yahay kansarka heerka koowaad ee 2006. Sida looga saaro formaldehyde loona hagaajiyo tayada hawada waxay noqotay mowduuc caafimaad oo aynaan iska indho tiri karin. Si kastaba ha noqotee, waxaa la dhihi karaa formaldehyde, oo waxyeelo u geysta jirka bini'aadamka nolosha, waa meel walba. Waxyaabaha ku lug leh waxaa ka mid ah alaabta guriga, dabaqyo alwaax ah; dharka carruurta, shaatiyada aan birta ahayn; Baastada cuntada degdega ah, baastada bariiska; xayawaan fiiqan, qajaarka badda, xirmooyinka lo'da, gawaarida, iyo xitaa gawaarida. Ma aha wax adag in la arko dharka, cuntada, guryaha iyo gaadiidka - afarta waxyaalood ee ugu muhiimsan nolosheena, formaldehyde dhammaantood way ku lug lahaayeen. Qaaciddada 'formaldehyde' ayaa dadka ka dhigeysa mid walwal badan.
Marka loo eego heerka qaran, xaddiga maadada loo yaqaan "formaldehyde" ee lagu sii daayo gaadhiga waa inuusan ka badnaan 0.08 mg; haddii ay gaarto 0.1-2.0 mg, 50% dadka caadiga ah way urin karaan urta; haddii ay gaarto 2.0-5.0 mg, indhaha iyo dhuunta neef mareenka ayaa si xoog leh u xanaaqaya, oo keenaya dhaawac daran. Hindhiso, qufac iyo astaamo kale; gaaraya 10 mg ama ka badan, dhibaatooyinka neefsashada; gaarayo 50 mg ama ka badan, waxay sababi doontaa cuduro halis ah sida oof wareenka; waxaa sii dheer, formaldehyde wuxuu kaloo saameyn ku yeelan karaa bacriminta, tusaale ahaan, neefsashada muddada-dheer ee formaldehyde ee haweenka uurka leh waxay sababi kartaa dhalanrog dhallaanka iyo xitaa dhimasho; Neefsashada muddada-dheer ee formaldehyde-ka ragga sidoo kale Waxay u horseedi kartaa cawaaqib xumo sida dhalmo la'aan iyo xitaa dhimasho.
Sannadkii 2010-kii, markii ugu horreysay ee Tayo-qabka Tayada Hawada ee Gudaha iyo Caafimaadka Tacliinta Caafimaadka la sii daayay xog la yaab leh: Tirada dhaawacyada ka dhashay wasakheynta hawada gudaha ee dalka ayaa gaartay 111,000 sanad kasta, celcelis ahaanna 304 qof ayaa maalin walba la jabiyaa.
Xaqiiqdii, ha ahaato qurxinta gawaarida cusub ama gawaarida duugga ah, waxaa jira haraaga halista ah ee walxaha waxyeelada leh, oo ay ugu badan yihiin benzene, xylene iyo taxanaha kale ee benzene, formaldehyde, acetone iyo walxaha kale ee waxyeelada leh, kuwaas oo sababi doona wasaqowga hawada ee gaariga. Dareemida neefsashada jirka bini'aadamka, astaamaha muddada-gaaban sida cunaha oo aan raaxo lahayn, dawakhaad, daal, xasaasiyadda maqaarka, u nuglaanta hargabka, hoos u dhaca difaaca jirka, iyo leukopenia, iwm, ayaa sabab u noqda cudurrada waaweyn sida kansarka dhawr sano ka dib, taasoo horseed u ah luminta farxadda qeybta labaad ee nolosha.
Gogosha dabaqa gawaarida waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan tayada iyadoo xoogga la saarayo wax ku oolnimada. Kaliya tayo wanaagsan ayaa caafimaadkeena la damaanad qaadi karaa. Intaa waxaa sii dheer, baabuurtu waxay u dhigantaa gurigeenna labaad, derbiyada sagxadda baabuurtu waxay u dhigmaan dabaqyada guriga. Waa inay ahaadaan kuwo deegaanka u fiican oo aan dhadhamin, Si fudud loo nadiifiyo, oo aan lahayn bakteeriya.
Waxaan rabnaa inaan u keenno milkiilayaasha baabuurta derinno kafiican. Kaliya hal-cirbad cirbad-mideysan oo buuxa TPE ayaa keeni kara run ahaantii jawi saaxiibtinimo iyo khibrad wadista-aan lahayn ur.
Xubin ka mid ah dhulka, horumarka mustaqbalka ee dhulka, waxaan soo bandhignay 100% alaabada bey'ada u wanaagsan ee loo yaqaan 'TPE' oo dib loo cusbooneysiin karo waxaanna ku dabaqnay cusbooneysiintooda alaabada derbiyada gawaarida si aasaasi ahaan loogu ilaaliyo deegaanka dhulka, loona hagaajiyo dhibaatooyinka deegaanka, loona yareeyo culeyska deegaanka. Wasakhda Waxaa la filayaa inay u keento milkiileyaasha baabuur khibrad waditaan caafimaad leh oo aamin ah isla markaana gacan weyn ka geysato ilaalinta deegaanka.